विश्वका दुई ठूला स्मार्टफोन कम्पनीको लडाईं : सामसुङलाई ५३ करोड ९० लाख रुपैयाँ जरिवाना - देश विकास डटकम
विश्वका दुई ठूला स्मार्टफोन कम्पनीको लडाईं : सामसुङलाई ५३ करोड ९० लाख रुपैयाँ जरिवाना
एजेन्सी, १४ जेठ । विश्वका दुई ठूला मोबाइल कम्पनी हुन् : एप्पल र सामसुङ । यी दुई विश्वमा स्मार्टफोन बनाउने ठूला कम्पनी । तर दुईको ठ्याक भने कहिल्यै मिल्दैन । बेला बेलामा फिचर चोरेको आरोप एक अर्कोलाई लगाउँछन् उनीहरु ।
दुई कम्पनीले अमेरिकामा सात वर्षदेखि पेटेन्टका लागि कानुनी लडार्इंमा थिए । गएको विहीबार कानुनी लडाईंको अन्ति फैसला आयो । जसमा सामसुङले हारको सामाना गर्नुपर्यो । एप्पलले सामसुङलाई हराउँदै जरिवाना बापतको रकम समेत पाउने भएको छ । दक्षिण कोरियाको कम्पनी सामसुङलाई अमेरिकी अदालतले ५३ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात ५३९ डलर क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको छ ।
अमेरिकाको क्यालिफोर्निामा रहेको अदालतले सामसुङले एप्पलको मुख्य फिचर चोरी गरेको दोषी ठहर गरेको हो । एप्पलको आइफोनको डिजाइन र फंक्शन चोरी गरेको अदालतको ठहर छ ।
सन् २०११ मा पेटेन्टको विषयलाई लिएर सामसुङ र एप्पलबीच कानुनी लडाई सुरु भएको थियो । सन् २०१२ मा सामसुङले तीन डिजाइन चोरी गरेको आरोप लागेको थियो । त्यतिबेला एप्पललाई भएको नोक्सानीका लागि झण्डै १.०५ अर्ब डलरको जरिवाना तिराइएको थियो ।
← आइपिएल क्रिकेटको उपाधिमा चेन्नाईको ह्याट्रिक, सेन वाट्सनको शतकीय पारी
विश्वकै बुढा मानिसको चाहना : ‘धुम्रपानरहित बाँच्न चाहन्छु’ →
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा धादिङ जिल्लाको स्थानिय तहहरूले प्राप्त गर्ने वजेट कति? (रकम सहित)
१६ जेष्ठ २०७८, आईतवार १५:०२ Krishi Bihani 0
४ बैशाख २०७५, मंगलवार ०८:५८ Saroj Poudel 0
प्रियंकाको जुत्ताको मूल्य कति ?
१६ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०६:५३ Saroj Poudel 0